Fanaraha-maso ny vidin’entana: fanentanana ho fiarovana ny mpanjifa | NewsMada
Fanaraha-maso ny vidin’entana: fanentanana ho fiarovana ny mpanjifa
Nidina teny Analakely, ny faran’ny herinandro teo, ny mpanara-maso ny varotra. Hita tamin’izany ny tsy fanarahan-dalàna sy fanararaotana samihafa ataon’ireo mpivarotra sasany. “Tsy vitsy amin’izy ireo ny mampiakatra vidin-javatra fotsiny amin’izao, omaly hafa ny vidiny, anio miova sahady sady miakatra ny momba ireo PPN no tsy apetraka ny vidiny, faktiora tsy ara-dalàna”, hoy ny talen’ny varotra anatiny, Randriamananjara Naina ao amin’ny minisitera misahana ny varotra sy ny fanjifana (MICC).
Isaky ny asabotsy sy alahady no miakatra ny vidin’entana, raha ny fitarainana tonga any amin’ireo mpanara-maso ny varotra, koa mampitandrina ireo mpivarotra izy ireo, fampitandremana am-bava aloha tsy hanararaotra amin’ny vidin’entana. Karazana fanentanana hanara-dalàna, ho fiarovana ny mpanjifa.
Nasian-teny ihany koa ireo mpanara-maso ny varotra mba tsy handairan’ny kolikoly. “Tsy maintsy mampiseho taratasy momba izay iraka ampanaovina azy ireo mpanara-maso ireo . Raha mihoa-pefy ireo mpanara-maso ny varotra ireo, dia azo hampiharana sazy “, hoy ny talen’ny varotra anatiny. Fanentanana aloha amin’izao voalohany izao, aorian’izay ny fanasaziana ampiharina amin’izay tsy manara-dalàna, mpivarotra sy mpanara-maso mora handairan’ny kolikoly.